MPANAKANTON’I MAHAJANGA : Nifarana tamin’ny fifandonana ny fifampiarahabana nahatratra ny taona
Araka ny vaovao voaray dia teny tsy voahevitra nataon’i mpanakanto Max Exception no niatombohan’io gidragidra io. 10 février 2019
Niakatra ny fihetseham-pon’ny tarika Fito sy iray raha nahita an’ andriamatoa Martin nandray fanamafisam-peo nihira nandritra ny ampaham-potoanan’i Max Exception. Mpanakanto no sady filoham-pokontanin’i Mangarivotra i Martin, izay voaasa nandritra io lanonana fifampiarahabana nahatratra ny asaramanitra io ny harivan’ ny zoma 08 febroary lasa teo tao amin’ny tranoben’ny kolontsaina teto Mahajanga.
Teny vahiny hoe "sauvage" no nandikan’i Max Exception ny fihetsik’i Martin fito sy iray, raha nandray ny fanamafisam-peo nihira ny hiran’ny tarika Kaiamba nandritra io fotoana io, ka nitabataba izy nanao io teny tsy voahevitra io, ary niampy fiantsiana hiady ihany koa. Niravina ihany avy eo io disadisa io, rehefa niditra an-tsehatra ny mpanakanto sasany naman’izy ireo nanelanelana ny raharaha.
Minitra vitsy taorian’izay dia raikitra indray ny an’ny tarika " Eli", filohan’ny mpanakanto eto Mahajanga sy " Soara", avy ao Tsararano, izay samy mpanakanto avy eto an-toerana avokoa ny roa tonta. Nanaovan’i Soara teny manivaiva teo imason’ny rehetra ity filohan’izy ireo ity noho ny tsy fisian’ny fangaraharahana ny vola nolaniana tamin’ity fetin’izy ireo ity. Nisy, hoy izy, ny latsakemboka fandraisan’ireto mpanakanto ireto anjara, mbola nisy koa ireo tolo-tanana nataon’ireo mpanampy azy ireo tamin’ny resaka ara-bola "le raha", ary mbola nanome ihany koa ny prefen’i Mahajanga. Tsy nazava tamin’ireo mpanakanto sasany ireo ny nikirakirana ireo vola ireo sy nanodinana ny ondry roa natao tsaky. Raikitra ny sahotaka ary saika niafara tamin’ny fifampikasihan-tanana mihitsy aza.
Azo lazaina fa diso fanantenana ny raiamandreny eto an-toerana tonga nanatrika iny fotoana iny dia Andriamasimbelo Tina, talem-paritry ny kolontsaina eto Boeny sy i Tony Christophe, talen’ny tranoben’ny kolontsaina raha nitafa taminay. Ho fampivondronana sy ho firaisankina ny mpanakanto no anton’ity lanonana natao ity, saingy nifanohitra tamin’izay tanteraka ny fety natao. Eo aminy fotodrafitrasa kosa dia hisy ny fanavaozana ny " banja ny toalaza", izay ao anatin’ny fefy ny tranoben’ny kolontsain’i Mahajanga ity ihany atsy hoa atsy, araka ny fanambaràn’ireo tompon’andraikitra taminay. Na misy aza izany ezaka ataon’ny tompon’andraikitra izany, tokony hiezaka hanova ny toe-tsaina sy ny fomba fifandraisana ireo mpanakanto eto Mahajanga satria natao hanabe ny vahoaka ary fitaratra amin’izao atao.